အရွယ်အစား: L590 * W410 * H200 / 400mm 1. သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ABS ရာဘာနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ထိုင်ခုံက F-36-3 အဓိကအင်္ဂါရပ်: 480-620mm မှ 2. သဘာဝဓာတ်ငွေ့နွေ ဦး ရာသီဥတုအားဖြင့် 1. variable ကိုအမြင့် 2. အခြေစိုက်စခန်း, casters နှင့်အတူအကိုင်းအခက် 5; 3. ထိုင်ခုံ Dia.320mm ဖြစ်ပါတယ်။ cushion top 4.knock construction
အရွယ်အစား - ၂၄၀၀ မီလီမီတာ (L) * ၁၆၈၀ မီလီမီတာ (ဟ) အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ဆေးကြောနိုင်သောအထည်ကုလားကာများနှင့် ၂ ။
Semi-fowler bed H-2 အတွက်မွေ့ရာ
အရွယ်အစား: L1930mm × W890mm × H80mm အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: 1. အရည်အသွေးမြင့်ရေမြှုပ်သည်သိပ်သည်းဆမှာ 35KGS / M3 နှင့်ရေချိုးနိုင်သောနှင့်မီးခံနိုင်သောရေစိုခံအထည်အဖုံးဖြစ်သည်။ 2. ဇစ်နှင့်အတူ
H-13 မွေ့ယာအဖုံး: PU ရေစိုခံ။ ရှင်သန်နိုင်သောပစ္စည်းများမွေ့ရာများဖြည့်: မြင့်မားသောဒဏ်ခံနိုင်သောရေမြှုပ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်များ
DE-1C1 အပလီကေးရှင်းများ products ဤထုတ်ကုန်များသည်ရေရှည်အိပ်ရာဝင်သည့်လူနာများနှင့်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ရွေ့လျားမှုပြorနာသို့မဟုတ်ရွေ့လျားမှုခံစားနေရသောလူနာများအတွက်အကျုံးဝင်သည်။ ၎င်းကိုစောင့်ရှောက်သူများ၏အကူအညီဖြင့်ဆေးရုံများ၊ သူနာပြုစင်တာများသို့မဟုတ်အိမ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စောင့်ရှောက်သူများသည်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြင့်လူနာအားရွေ့လျားစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလုပ်သမားချွေတာသောဒီဇိုင်းသည်စောင့်ရှောက်သူများ၏မလျော်ကန်သောအင်အားကြောင့်ဖြစ်ရသောလူနာ၏နောက်ကျောဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ: ○အဓိကဘောင်သည်အမှုန့်ပါသောမြင့်မားသောသံမဏိပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ...